Fanandramana tokony refesina ny vokany eo ho eo, fa ny vokany dia mety ho hafa noho ny olona samy hafa.
Ny faharoa hevitra manan-danja noho ny hifindra any an-dafin'ny fanandramana tsotra dia heterogeneity ny fitsaboana vokatry. Ny fanandramana ny Schultz et al. (2007) -kery mampiseho ny fomba fitsaboana ihany dia afaka manana fiantraikany isan-karazany eo amin'ny karazana olona (Sary 4.4), fa io fandinihana ny heterogeneity raha ny marina tena tsy mahazatra ho an'ny taona Analog fanandramana. Analog indrindra tafiditra amin'izany fanandramana taona vitsivitsy ny mpandray anjara izay raisina ho toy interchangeable "gadget" satria kely ny momba azy ireo no fantatra mialoha fitsaboana. Amin'ny fanandramana nomerika, na izany aza, ireo angon-drakitra faneren'ny tsy dia fahita, satria mpikaroka mirona kokoa ny mpandray anjara, ary hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo. Ao amin'io tontolo angona samy hafa isika, dia afaka maminavina heterogeneity ny fitsaboana vokatry mba hanome fanazavana momba ny fomba fiasan'ny ny fitsaboana, ny fomba azo kokoa, sy ny fomba azo lasibatra ho an'ireo indrindra mety ho soa.
Roa ohatra ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry ao anatin'ny fenitra ara-tsosialy sy ny fampiasana angovo avy fanampiny fikarohana amin'ny Angovo Home Reports. Voalohany, Allcott (2011) Nampiasa ny santionana lehibe habe (600.000 tokantrano) mba bebe kokoa namaky ny santionany sy Tombanan'ny ny vokatry ny Home Angovo Report amin'ny decile ny mialoha ny fitsaboana ny fampiasana angovo. Raha Schultz et al. (2007) nahita fahasamihafana eo amin'ny mavesatra sy maivana mpampiasa, Allcott (2011) hita fa nisy ihany koa ny tsy fitoviana ao anatin'ny mavesatra sy mazava vondrona mpampiasa. , Ohatra, ny mpampiasa mavesatra indrindra (ireo izay ao an-tampon'ny decile) nihena ny fampiasana angovo avo roa heny toy ny olona eo afovoan'ny ny vondrona mpampiasa mavesatra (Sary 4.7). Ankoatra izany, estimating ny vokany amin'ny alalan'ny fitondran-tena mialoha ny fitsaboana ihany koa ny nanambara fa tsy nisy vokany Boomerang dia ny mampirehitra mpampiasa (Sary 4.7).
Sary 4.7: Heterogeneity ny fitsaboana vokatry in Allcott (2011) . Ny fihenan'ny amin'ny fampiasana angovo dia hafa ho an'ny olona samy hafa deciles ny fototra fampiasana.
Ao amin'ny fanadihadiana mifandray, Costa and Kahn (2013) naminavina fa ny fahombiazan'ny ny Home Report Angovo afaka miovaova mifototra amin'ny foto-kevitra ara-politika ny mpandray anjara sy ny fitsaboana mety tena mahatonga ny olona sasany foto-kevitra mba hampitombo ny fampiasana herinaratra. Amin'ny teny hafa, dia naminavina fa ny Home Angovo Reports mba mamorona ny Boomerang vokany ho an'ny karazana sasany ny olona. Mba hijery izany mety, Costa sy Kahn natambatra ny Opower tahirin-kevitra miaraka amin'ny angon-drakitra novidiny avy amin'ny antoko fahatelo-fanangonan-izay ahitana vaovao toy ny antoko politika fisoratana anarana, fanomezana ny tontolo iainana fikambanana, sy ny ankohonany ny fandraisana anjara amin'ny fandaharana angovo azo havaozina. Miaraka ity dataset natambatra, Costa sy Kahn nahita fa ny Home Angovo Reports namokatra ankapobeny vokatry ny mpandray anjara mitovy amin'ny firehan-kevitra samy hafa; tsy nisy porofo nampiseho fa ny vondrona Boomerang vokany (Sary 4,8).
Sary 4.8: Heterogeneity ny fitsaboana vokatry any Costa and Kahn (2013) . Ny tombanana eo ho eo ny fitsaboana vokatry ny santionany iray manontolo dia -2,1% [-1,5%, -2,7%]. Amin'ny alalan'ny fanakambanana ny vaovao avy amin'ny fanandramana miaraka amin'ny vaovao momba ny tokantrano, Costa and Kahn (2013) Nampiasa andianà antontan'isa modely mba Tombanan'ny ny fitsaboana vokany noho ny vondron'olona manokana. Roa vinavina dia aseho ho an'ny vondrona tsirairay satria ny vinavina miankina amin'ny covariates dia tafiditra tao amin'ny antontan'isa modely (jereo ny modely 4 sy modely 6 ao amin'ny Loha 3 sy Loha 4 in Costa and Kahn (2013) ). Rehefa avy amin'io tantara io, dia mety ho vokany fitsaboana hafa ho an'ny olona samy hafa sy ny vinavina ny fitsaboana vokatry azo avy amin'ny modely antontan'isa dia afaka miankina amin'ny antsipirihany ireo modely (Grimmer, Messing, and Westwood 2014) .
Araka ireo ohatra roa mampiseho, ao amin'ny taona nomerika, dia afaka mifindra avy amin'ny estimating eo ho eo fitsaboana vokatry ny estimating ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry satria afaka manana mpandray anjara maro ary fantatsika bebe kokoa ny momba ireo mpandray anjara. Mianatra momba ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry afaka manampy mikendry ny fitsaboana izay izany no mahomby indrindra, manome zava-misy izay mandrisika teoria vaovao fampandrosoana, ary manome hamantatra izany momba ny mety ho rafitra, ny lohahevitra mba izay mitodika ankehitriny.